ALINA PADIKKAL အသက်၊ ရည်းစား၊ ခင်ပွန်း၊ မိသားစု၊ - ဖျော်ဖြေရေး
Alina Padikkal အသက်၊ ရည်းစား၊ ခင်ပွန်း၊ မိသားစု၊
အလုပ်အကိုင် မင်းသမီး, ရုပ်မြင်သံကြားတင်ဆက်သူ
အချစ် တီဗီ (အိမ်ရှင်): လိပ်ပြာ (2004)
တီဗီ (မင်းသမီး): Bharya (2016) ကို Nayna အဖြစ်
မွေးနေ့ ၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၉၅ (တနင်္ဂနွေ)
မွေးရပ်မြေ Thiruvananthapuram, Kerala, အိန္ဒိယ
ဇာတိမြို့ Thiruvananthapuram, Kerala, အိန္ဒိယ
ကျောင်း သန့်ရှင်းသောဘုရားကောင်းကင်တမန်များ '' I.S.C. Thiruvananthapuram ကျောင်း
ကောလိပ် / တက္ကသိုလ် •ခရစ်တက္ကသိုလ်၊ ဘန်ဂလို
ပညာရေးဆိုင်ရာအရည်အချင်းများ • B.A. စိတ်ပညာနှင့်အင်္ဂလိပ်စာပေ၌တည်၏
• MBA ဘွဲ့
ဝါသနာ ခရီးသွားခြင်း၊ ကခုန်ခြင်း၊ ဈေးဝယ်ခြင်း
အငြင်းပွားစရာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်အယ်လီနာသည်ယူကျု့ချန်နယ်တစ်ခုနှင့်အင်တာဗျူးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူမ၏ပရိသတ်တစ် ဦး သည်ဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Troll ဗီဒီယိုသည်အင်တာဗျူးသူများ၏မေးခွန်းများကိုရောစပ်ပြီးလူကြိုက်များသောရုပ်ရှင်အချို့မှရုန်းရင်းခတ်စကားပြောဆိုမှုများဖြင့်အယ်လီနာ၏အဖြေများကိုပြုပြင်သည် Troll ဗီဒီယိုသည်လူမှုမီဒီယာတွင်ပျံ့နှံ့သွားသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Alina သည်သူမအား social media account မှတဆင့် trollers များကိုရဲရင့်သော LIVE ဗီဒီယိုဖြင့်ခိုးယူခဲ့သည်။  အိန္ဒိယ၏ Times
မိဘများ ဖခင် - K Padikkal
အမေ - Bindu Philipose
နှမ - သူ့မှာညီမတစ်ယောက်ရှိတယ်။
စက်ဘီး (များ) တော်ဝင် Enfield ကျည်ဆံ, KTM Duke
ကားစုဆောင်းခြင်း Hyundai i20, Skoda Rapid
Alina Padikkal နှင့်ပတ်သက်ပြီးလူသိနည်းတဲ့အချက်အလက်အနည်းငယ်သာ
Alina Padikkal သည် Kerala ရှိ Thiruvananthapuram တွင်လူလတ်တန်းစားမိသားစုမှမွေးဖွားခဲ့သည်။
Alina Padikkal ရဲ့ကလေးဘဝရုပ်ပုံလွှာ
Alina သည် ၁၀ နှစ်အရွယ်တွင်တီဗွီအစီအစဉ်များကိုစတင်လက်ခံခဲ့သည်။
သူမသည် Asianet အပေါ်သားသမီးရဲ့ပြပွဲ 'လိပ်ပြာ' hosting အားဖြင့်ကျောက်ဆူးအဖြစ်သူမ၏ပွဲ ဦး ထွက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ထိုအစီအစဉ်ကိုလက်ခံခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကျောက်ဆူးများအတွက်အယ်လီနာသည်ကီရာလာပြည်နယ်ရုပ်မြင်သံကြားဆု (၂၀၀၅) ကိုရရှိခဲ့သည်။
နောက်ပိုင်းတွင်သူမသည်ကွဲပြားခြားနားသောတီဗီရုပ်သံလိုင်းများဖြစ်သော“ Kiran TV”၊ “ Surya TV” နှင့်“ Asianet Plus” ကဲ့သို့သောပြပွဲများစွာကိုကျင်းပခဲ့သည်။
ထို့နောက်သူသည်ဘန်ဂလို၏အောက်စ်ဖို့ဒ်ကောလိပ်မှ MBA ဘွဲ့ကိုရယူခဲ့သည်။
Alina သည်သူမ၏သရုပ်ဆောင်မှုကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်မလေးရာလမ်ရုပ်မြင်သံကြား“ Bharya ။ ” ဖြင့်ပြသခဲ့သည်။ သူမသည်အမှတ်စဉ်အတွက် '' Nayna '' ၏အခန်းကဏ္playedကိုပါဝင်ခဲ့သည်။
သူမသည် Flowers TV ပေါ်ရှိ“ Smart Show”၊ Mazhavil Manorama ရှိ“ Komady Circus”၊ “ ACV” တွင်“ Hot n 'Spicy” (cookery show) နှင့် Mazhavil Manorama တီဗီတွင်“ D4Dance Junior vs Senior” ကဲ့သို့သောလူကြိုက်များသောအဖြစ်မှန်တီဗွီအစီအစဉ်များကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့သည်။ ။
သရုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ကျောက်ချခြင်းအပြင် Alina သည် Sunita ပရိဘောဂများကဲ့သို့သောတီဗီကြော်ငြာအနည်းငယ်တွင်လည်းပါဝင်ခဲ့သည်။
၂၀၂၀ တွင် Alina သည် Bigg Boss Malayalam2၏အိမ်သို့ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။
သူသည်တိရိစ္ဆာန်ချစ်ခင်သူဖြစ်ပြီးခွေးကလေး Suie ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။
အကယ်၍ သူမသည်နိုင်ငံ့ ၀ န်ဆောင်မှုစာမေးပွဲတွင်အောင်မြင်မည်ဆိုလျှင်အိန္ဒိယရဲတပ်ဖွဲ့ ၀ န်ထမ်းကိုရွေးချယ်လိုကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
shahid kapoor အစ်မ sanah kapoor
မွေးဖွား Donald Trump ၏နေ့စွဲ
Hindi အတွက် irfan Khan အတ္ထုပ္ပတ္တိ